Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy hialoha anareo, mba tsy hahalany taranaka anareo amin’ny tany, fa hamelona anareo amin’ny famonjena lehibe. Ary amin’izany, tsy hianareo no nampandeha ahy ho atỳ, fa Andriamanitra; ary Izy nanao ahy ho rain’i Farao, sy ho tompon’ny ao an-tranony rehetra, ary ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra. » Gen. 45:7,8.
Drafitr’Andriamanitra tamin'ny alalan'i Josefa ny hampiditra ny fivavahan'ny Baiboly eo anivon'ny Egiptianina. Izany fijoroana vavolombelona feno finoana izany dia natao hanehoana an'i Kristy ao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Tamin'ny alalan'ny nofy dia nifandray tamin'i Josefa, teo amin'ny fahatanorany, Andriamanitra ka nanome fambara ny amin'ny andraikitra avo niantsoana azy hiantsorohany. Ho fanatanterahana ny nofy, ireo rahalahin'i Josefa dia nivarotra azy ho andevo, kanefa izany asa ratsin'izy ireo izany dia vao mainka nahatontosa ny nofy nolazaina mialoha.
Ireo izay mitady hamily làlana ny fikasan'Andriamanitra ka manohitra ny sitrapony dia mety ho toy ny hoe hahomby amin'ny fotoana sasantsasany ; saingy Andriamanitra dia miasa mba hahatanteraka ny fikasany ka hasehony hoe Iza no mpanapaka ny lanitra sy ny tany.
Noheverin'i Josefa fa ny nivarotana azy tany Egipta no fahoriana lehibe niantonta taminy ; kanefa hitany ny nilana ny nahatoky an'Andriamanitra mihoatra noho ny hatramin'izay mihoatra noho ny fony mbola teo anatrehan-drainy aza. Niaraka tamin'i Josefa tany Egipta Andriamanitra ary hita mazava izany na an-kasoavana na an-karatsiana. Sahala amin'ny naha-teo hatrany ny vata fiara nitondra fiadanam-po sy fahombiazana ho an'ny Isiraely dia toy izany koa no nitondran'ny fahatanoran'i Josefa feno fitiavana sy fahatahorana an'Andriamanitra fitahiana ho an'i Egipta. Hita tamin'ny fomba manokana izany tamin'izy niasa tao amin'i Potifara ; hita hoe avy amin'ilay andevo nenjehina fatratra no niavian'ny fitahiana ka nentiny ho toy ny zanaka i Josefa fa tsy toy ny mpanompo. Fikendren'Andriamanitra ny hanomezam-boninahitra ihany koa ireo izay tia Azy sy manome voninahitra ny anarany ka ny voninahitra natolotra an'Andriamanitra tamin'ny alalany dia hitaratra amin'izy ireo rahateo.
Tsy niova ny toetran'i Josefa rehefa nahazo toeram-pitokisana izy. Napetraka tamin'ny toerana izay namirapiratan'ny toetra tsara tamin'ny fomba manokana tamin'ny alalan'ny asa tsara izy. Tsy nahasaraka azy ny fitahian'Andriamanitra na tao an-trano na tany an-tsaha. Napetraka taminy avokoa ny andraikitra goavana tao an-tranon'i Potifara. Ary tsy nisy nokianina izy tamin'izany rehetra izany satria tia sy natahotra an'Andriamanitra. YI, 11 Martsa 1897.